शुभ बिहानी??आज कार्तिक १८ गते सोमबारको राशिफल पढि शे’यर ग’र्नुहोस । – " सुलभ खबर "
शुभ बिहानी??आज कार्तिक १८ गते सोमबारको राशिफल पढि शे’यर ग’र्नुहोस ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) लामो दुरिको बैदेशिक यात्राको तय हुनेछ भने बिदेशी सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्या देखापर्न सक्ने तथा उपचार खर्च बढ्ने योग रहेको छ । अनावश्यक खर्च बढ्ने हुदा दैनिक खर्च बढेर जानेछ। न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर समय ब्यातित गर्नुपर्दा अन्य काममा समय दिन सकिने छैन । अल्छी गर्ने बानीले कामहरु बिग्रन सक्छ । माया प्रेममा मनमुटाव सिर्जना हुनेछ ।
बदला लिन जे पनि गर्छन् यी ४ राशि हुनेहरु !
एजेन्सी- जन्म समय अनुसार हरेक मानिसहरुलाई ज्योतिषशास्त्रले १२ वटा राशिमा विभाजित गरेको छ। जन्मसमयमा हुने
निकै चलाख हुन्छन् यी ५ राशिका महिलाहरु !
हरेक मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको गुण वा क्षमता हुन्छ। त्यस्तै, मानिसको राशि अनुसार पनि